ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်နိုင်တဲ့သတင်းမှားတွေ ရေးသားနေသူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ မေချစ်သွေး –7Day Daily News
သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ ကမ္ဘာ့အချောဆုံးအမျိုးသားအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ မီဒီယာတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေးက ပိုင်တံခွန်ရဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်မမှန်ရေးသားနေကြတဲ့ မီဒီယာတွေကို အခုလိုပဲပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပေ့ချ်တစ်ခုကနေပြီး ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေးဟာ စင်္ကာပူမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့် TC Candler ရဲ့ ဆုပေးပွဲကို ပိုင်တံခွန်နဲ့ရုပ်ချင်းတူတယ်လို့
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကောင်လေးကို အစားထိုးတက်ခိုင်းဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ထိုကောလဟာလနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေးက “ဘယ်က အစ်မက စီစဉ်တာလဲ? သတင်းကို သေချာမစုံစမ်းမစစ်ဆေးပဲ နာမည်လျှောက်တပ်တဲ့ page ရေ -ီး ပဲ Attention လိုချင်ရင် တခြားနည်းနဲ့ရှာဟ🖕🏻 Edit.. အဲ့ကောင်လေးကိုတော့ အားနာပါတယ်
သူလဲ မဆီမဆိုင်အပြောခံနေရရှာတာ ပြောချင်တာက ခေါင်းစဉ်လျှောက်တပ်ရေးတဲ့ page တွေကိုပဲ😤”ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေးကတော့ ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတောင် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့သတင်းတွေရေးသားနေတဲ့ ပေ့ချ်အတုတွေကို စိတ်တိုစွာနဲ့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့လကပဲ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕မွာပဲ ကမာၻ႔အေခ်ာဆုံးအမ်ိဳးသားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ ပိုင္တံခြန္ဟာ ပရိသတ္ေတြနဲ႕အတူ မီဒီယာေတြရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္ျခင္းခံေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႕မွာလည္း ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အစ္မ ေမခ်စ္ေသြးက ပိုင္တံခြန္ရဲ႕သတင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မမွန္ေရးသားေနၾကတဲ့ မီဒီယာေတြကို အခုလိုပဲေျပာလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေပ့ခ်္တစ္ခုကေနၿပီး ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အစ္မ ေမခ်စ္ေသြးဟာ စကၤာပူမွာက်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ TC Candler ရဲ႕ ဆုေပးပြဲကို ပိုင္တံခြန္နဲ႕႐ုပ္ခ်င္းတူတယ္လို႔
နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ေကာင္ေလးကို အစားထိုးတက္ခိုင္းဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ထိုေကာလဟာလနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အစ္မ ေမခ်စ္ေသြးက “ဘယ္က အစ္မက စီစဥ္တာလဲ? သတင္းကို ေသခ်ာမစုံစမ္းမစစ္ေဆးပဲ နာမည္ေလွ်ာက္တပ္တဲ့ page ေရ -ီး ပဲ Attention လိုခ်င္ရင္ တျခားနည္းနဲ႕ရွာဟ🖕🏻 Edit.. အဲ့ေကာင္ေလးကိုေတာ့ အားနာပါတယ္
သူလဲ မဆီမဆိုင္အေျပာခံေနရရွာတာ ေျပာခ်င္တာက ေခါင္းစဥ္ေလွ်ာက္တပ္ေရးတဲ့ page ေတြကိုပဲ😤”ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အစ္မ ေမခ်စ္ေသြးကေတာ့ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ပိုင္တံခြန္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာင္ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့သတင္းေတြေရးသားေနတဲ့ ေပ့ခ်္အတုေတြကို စိတ္တိုစြာနဲ႕ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။